NMRV -NRV Worm Gear Speed ​​Reduction Unit - Singapore power transfer manufacturer pte ltd
NMRV-NRV Ogige Na-ebelata Speed ​​Worm
Category: Gearbox (reducer)
RV usoro ndị na -ebelata ọsọ ọsọ worm gear:
nha: 025,030,040,050,063,075,090,110,130,150 (etiti n'etiti oghere)
oke ọsọ: 5,7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100
akwa mma Tn ọla kọpa worm wheel
eburu NSk biarin
mmanụ dị elu sịntetik mmanụ
1, ịdị arọ na obere nha nwere ike ịchekwa ebe maka ịwụnye.
2.nkwado maka nrụnye ebe niile, radiator nke ọma. Ike ibu dị elu
3.gbachiri mkpọtụ na obere mkpọtụ, ntụkwasị obi dị elu na oke oke ọsọ dara.
4. ike ike, nnukwu ibu ibu, na ogologo ọrụ ndụ
Emere NMRV025-150 site na igwe mgbasa ozi Nayuan nwere ọtụtụ uru ma e jiri ya tụnyere onye na-ebelata ọsọ nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ mere. Igbe ụlọ ọrụ worm gearbox anyị dị n'ọtụtụ nha na oke maka azịza dị ọnụ ala nke a pụrụ ịdabere na ya. Nnyefe Nayuan na -anabata igbe nkedo aluminom alloy dị elu iji rụpụta irighiri ihe na -emepụta irighiri iji hụ na ndụ ogologo ọrụ a pụrụ ịdabere na ya. Njirimara ngwa ihe na-ebelata ihe irighiri irighiri anyị dị obere, ọdịdị dị mma, kọmpat kọmpat na ihe nchara nchara. Nayuan nwere ike inye ndị na -azụ ahịa ịhọrọ oke mbelata ngwa ngwa irighiri ngwa.
Direct factory nye gearbox moto / nnyefe gearbox / n'ibu gearbox
1. Emere alloy alloy dị elu, ọkụ dị arọ ma na-enweghị nchara
2. Nnukwu na nrụpụta mmepụta
3. Ezigbo na-agba ọsọ na obere mkpọtụ, nwere ike ịrụ ọrụ ogologo oge na ọnọdụ dị egwu
4. Elu na radiating arụmọrụ
5. Ọ dị mma n'ile anya, na-adịgide adịgide na ndụ ọrụ na obere na olu
6. Adabara Omnibearing echichi
1. Housinglọ: ịnwụ-ajụ aluminom alloy (Housinglọ obibi: 025-090); igba ígwè (Housinglọ obibi: 110-150)
2. aro: 20Cr, carbonize na quencher okpomọkụ ọgwụgwọ na-ekweghị ekwe nke gia nha elu ruo 56-62 HRC, idowe carburization oyi akwa si ọkpụrụkpụ n'etiti 0.3-0.5mm mgbe kpọmkwem egweri.
3. Worm Wheel: Wearable ọla kọpa
Ihe osise dị n'elu
Maka Alloy Alloy Housinglọ:
1. Shot ọgbụgba ọkụ na pụrụ iche antiseptik ọgwụgwọ na aluminum alloy elu
2. Mgbe phosphating, agba na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ sliver.
Maka Nkedo Iron Housing:
Tupu agba na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ sliver, mkpa agba na-acha uhie uhie antirust mgbu mbụ.